China akpa akpa FIBC buru ibu maka agwa nduku na ndị na -ebubata osisi Wode
A na -arụpụta akpa FIBC ventilashị iji hụ na mgbasa ikuku na -ebufe ka ọ na -ebuga n'enweghị nsogbu dịka poteto, eyịm, agwa na osisi osisi wdg, nke chọrọ ikuku dị mma iji dowe ọnọdụ kacha mma. Akpa buru ibu nwere ike inye aka idowe ọdịnaya n'ime mmiri dị ala nke na -enyere aka idobe ngwaahịa ọrụ ugbo maka ịdị ọhụrụ. Site na loops anọ na -ebuli elu, enwere ike ibu nnukwu ihe site na iji ụgbọ elu forklift na crane. Dị ka ụdị nnukwu akpa ndị ọzọ, enwere ike ịchekwa FIBC nke ikuku ventilashị nke dị n'èzí n'okpuru ìhè anyanwụ.
Ka ọ dị ugbu a, akpa ikuku nwere ike ịmalitegharị ma megharịa ya n'ihi 100% polypropylene na -amaghị nwoke.
Ndị otu ọkachamara anyị nwere ike nyere aka chepụta nha kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa gị.
Nkọwapụta nke FIBC ndị nwere ikuku
• Akwa ahụ: 160gsm ruo 240gsm nwere polypropylene na -amaghị nwoke nke 100%, UV na -agwọ, enweghị mkpuchi, nkwado ákwà kwụ ọtọ dị na nhọrọ;
• Loops nke akụkụ nkuku, loops n'akụkụ akụkụ, loops enyemaka dị na nhọrọ
Kedu ihe kpatara ị ga -eji họrọ FIBC?
Iji gbochie mmebi nri n'ihi mmiri mmiri, FIBC kwesịrị inwe akwa na -eku ume nke ọma ka ikuku banye n'ime akpa ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa na ibubata poteto, eyịm ma ọ bụ nkụ, akpa jumbo ga -abụ nke kacha mma. Karịsịa, nnukwu akpa a na-eku ume bụ ihe owuwu nke U-panel nke nwere oghere mepere emepe ma ọ bụ nke nwere ntụpọ yana ala ntụpọ maka ịpụ. Ogologo SWL sitere na 500 ruo 2000kgs. Ọ bụrụ na ejiri ya nke ọma wee kwakọba, enwere ike ịkwakọba akpa dị elu nke ukwuu iji ikike nchekwa nke ụlọ nkwakọba ihe mee nke ọma.
Osote: Pịnye akpa B FIBC nnukwu akpa nwere ihe mgbochi antistatic
Nke gara aga: Otu ma ọ bụ abụọ loops akpa FIBC nwere isi ihe na -ebuli elu
Akpa Jumbo Fibc, Akụ Fibc Akụkụ, Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Pp akpa Fibc, Ụdị akpa Fibc, Nnukwu akpa Fibc,